သင့် မျက်လုံးတွေကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဒဏ်မှ ကာကွယ်ဖို့ အကြံဉာဏ် လေးခု – Gentleman Magazine
သင့် မျက်လုံးတွေကို လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဒဏ်မှ ကာကွယ်ဖို့ အကြံဉာဏ် လေးခု
သငျ့ မကျြလုံးတှကေို လြှပျစဈပစ်စညျးဒဏျမှ ကာကှယျဖို့ အကွံဉာဏျ လေးခု
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်တုန်းက ကျွန်တော် အအေးမိပြီး အိပ်ရာထဲ ရက်တော်တော်ကြာ လဲနေခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဖျားက ပြင်းလွန်စတော့ ကျွန်တော့်အမြင်အာရုံကိုပါ ထိခိုက်သွားခဲ့ပြီး လက်တကမ်းစာထက် ပိုနီးတဲ့ ပစ္စည်းဟူသမျှ မှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်နေပါတယ်။
နေပြန်ကောင်းလာတော့ အမြင်အာရုံပြန်ရလာပေမယ့် အနီးမှုန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်တော့ ကျွန်တော့် အနီးမှုန်ဟာ ကျွန်တော့် အသက် (၄၀) ကျော်သွားတာကြောင့် ကြောင့် ဖြစ်ပြီး အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေ သုံးစွဲမှုက အမြင်အာရုံ ပျက်စီးတဲ့ အရှိန်ကို မြှင့်တင်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတာလို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ မျက်လုံးကို နေရောင်ထဲထွက်ရင် ခရမ်းလွန်ရောင်ချည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ဖို့ ကျင့်သားရနေကြပေမယ့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာတွေက ထုတ်လွှတ်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြာရောင် ရောင်ချည် နဲ့ စူးရှတဲ့ အလင်းတန်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့ မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒိရောင်ချည်တွေနဲ့ ကာလရှည် ထိတွေ့ရခြင်းက မျက်လုံးတွေကို မြန်မြန် ရင့်ရော်လာစေပါတယ်။
အပြာရောင် ရောင်စဉ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၂၄ နာရီ သဘာဝ နေ့စဉ် စက်ဝန်းကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်စက်မှု စက်ဝန်း ယိုယွင်းသွားခဲ့ရင် အိပ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ဟော်မုန်း Melatonin ကို ထုတ်လွှတ်ပေးမှုကို ဖိနှိပ်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ Melatonin ထုတ်လွှတ်မှု နည်းခြင်းဟာ ရင်သားကင်ဆာ၊ ပရော့စတိတ်ကင်ဆာ၊ ဆီးချို နှလုံးရောဂါနဲ့ အဝလွန်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။
သင်တို့ရဲ့ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ပဲ သင့်မျက်လုံးတွေနဲ့ သင့်ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ သင်က ကွန်ပြူတာ၊ ဒါမှမဟုတ် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးလုံးကို ပံမြှန်အသုံးပြုရင် သင့်မျက်လုံးကို ကာကွယ်ဖို့ အောက်ပါအချက်လေးတွေကို အသုံးချကြည့်ပါ။
၁. မျက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ
သင့်ရဲ့ Screen ကိုအမြဲ ကြည့်မနေပါနဲ့။ မိနစ် ၂၀ ကို တစ်ခါလောက် အနားယူပြီး မျက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ မျက်လုံးတွေကို လှုပ်ရှားပါ။ အဝေးကို ကြည့်ပါ။ မျက်လုံးတွေကို မှိတ်ပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ အဲဒိလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တစ်ခေါက်ကို ငါးကြိမ်မှ ဆယ်ကြိမ်အထိ လိုအပ်သလို လုပ်ပေးပါ။
အပြင်ထွက်ပြီး သဘာဝအလင်းရောင်နဲ့ ထိတွေ့လိုက်ရတာဟာ သင့်ကို သဘာဝနေ့စဉ်စက်ဝန်းနဲ့ ပြန်လည်ဆက်သွယ် ပေးနိုင်ပြီး ညဘက် စောစော အိပ်ပျော်ကာ မနက်နိုးတာနဲ့ လန်းဆန်းတက်ကြွစေနိုင်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းက သင့်ကို သဘာဝတရားနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ပေးပြီး တီထွင်ဉာဏ်ကိုပါ တိုးပွားစေပါတယ်။
၃. သင့်မျက်လုံးနဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို အဆင်ပြေအောင် ချိန်ညှိပါ
သင့် ဒီဂျစ်တယ် ကိရိယာလေးထဲက Setting တွေကို သွားကြည့်ပါ။ Font ကြီးကြီး သုံးပါ။ သင့် Screen ရဲ့ Contrast ကို တင်ပြီး Brightness ကို တိုးမြှင့်ကာ သင်နဲ့ သင့်မျက်လုံးတွေ အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ အနေအထားထိ ချိန်ညှိထားပါ။ သင့် Screen ကို အမြဲ သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်နေပါစေ။ Screen ကိုသင်မျက်လုံးကနေ အကွာအဝေး မျိုးစုံမှာ ထားကြည့်ခြင်းဖြင့် မျက်လုံးကို အကွာအဝေးမျိုးစုံ လိုက်ပါကြည့်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်က Android User ဆိုရင် အပြာရောင် ရောင်စဉ်တန်းတွေကို ကန့်သတ်ဖို့ Twilight ဆိုတဲ့ App ကို Playstore မှာ ရှာသုံးကြည့်ပါ။
၄. သင့်မျက်လုံးတွေ အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ
လူတွေဟာ ငွေ သိန်းပေါင်းများစွာကို သောက်သောက်စားစားနဲ့ သုံးဖြုန်းပစ်ကြပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဖိုးတန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးအတွက်ကျ တွန့်တိုနေတတ်ပါတယ်။ နေကာမျက်မှန် ကောင်းကောင်း ရှာဝယ်ကြည့်ပါ။ Gauss Eyewear ဟာ အပြာရောင် ရောင်စဉ်တန်းတွေကို ပိတ်ဆို့တားဆီးတဲ့ မျက်မှန်တစ်မျိုး ထုတ်လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဖုန်းတွေမှာလဲ အပြာရောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ Screen Guard တွေ ရှိပါတယ်။ ရှာဖွေ သုံးစွဲကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ စမတ်ဖုန်းတွေ၊ Tablet တွေကို စတင်သုံးစွဲလာတတ်တာ ဆယ်စုနှစ် မကျော်သေးပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဒီကိရိယာတွေဟာ ရေရှည်မှာ အမြင်အာရုံကို ဘယ်လိုထိခိုက်စေမလဲဆိုတာ ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ လောကကြီးဟာ သာယာလှပပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကိရိယာကို အမြဲ ငုံ့ကြည့်နေပြီး လောကကြီးကို မော့ကြည့်ဖို့ သတိမရခဲ့ရင် သင့်အမြင်အာရုံပါ ပျောက်ကွယ်သွားမယ် ဆိုတာတော့ သတိရပါ။
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျတုနျးက ကြှနျတျော အအေးမိပွီး အိပျရာထဲ ရကျတျောတျောကွာ လဲနခေဲ့ဖူးပါတယျ။ အဖြားက ပွငျးလှနျစတော့ ကြှနျတေျာ့အမွငျအာရုံကိုပါ ထိခိုကျသှားခဲ့ပွီး လကျတကမျးစာထကျ ပိုနီးတဲ့ ပစ်စညျးဟူသမြှ မှုနျဝါးဝါး ဖွဈနပေါတယျ။
နပွေနျကောငျးလာတော့ အမွငျအာရုံပွနျရလာပမေယျ့ အနီးမှုနျဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျကွညျ့တော့ ကြှနျတေျာ့ အနီးမှုနျဟာ ကြှနျတေျာ့ အသကျ (၄၀) ကြျောသှားတာကွောငျ့ ကွောငျ့ ဖွဈပွီး အီလကျထရောနဈပစ်စညျးတှေ သုံးစှဲမှုက အမွငျအာရုံ ပကျြစီးတဲ့ အရှိနျကို မွှငျ့တငျလိုကျသလို ဖွဈသှားတာလို့ ဆိုပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ဟာ မကျြလုံးကို နရေောငျထဲထှကျရငျ ခရမျးလှနျရောငျခညျြဒဏျမှ ကာကှယျဖို့ ကငျြ့သားရနကွေပမေယျ့ ဒဈဂဈြတယျကိရိယာတှကေ ထုတျလှတျတဲ့ အန်တရာယျရှိတဲ့ အပွာရောငျ ရောငျခညျြ နဲ့ စူးရှတဲ့ အလငျးတနျးတှကေို ကာကှယျဖို့ မလြေ့ော့နတေတျကွပါတယျ။ အဲဒိရောငျခညျြတှနေဲ့ ကာလရှညျ ထိတှရေ့ခွငျးက မကျြလုံးတှကေို မွနျမွနျ ရငျ့ရျောလာစပေါတယျ။
အပွာရောငျ ရောငျစဉျဟာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ၂၄ နာရီ သဘာဝ နစေ့ဉျ စကျဝနျးကို အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အိပျစကျမှု စကျဝနျး ယိုယှငျးသှားခဲ့ရငျ အိပျခွငျးကို ထိနျးခြုပျတဲ့ ဟျောမုနျး Melatonin ကို ထုတျလှတျပေးမှုကို ဖိနှိပျသလို ဖွဈသှားပါတယျ။ Melatonin ထုတျလှတျမှု နညျးခွငျးဟာ ရငျသားကငျဆာ၊ ပရော့စတိတျကငျဆာ၊ ဆီးခြို နှလုံးရောဂါနဲ့ အဝလှနျခွငျးတို့ကို ဖွဈပှားစပေါတယျ။
သငျတို့ရဲ့ အီလကျထရောနဈ ပစ်စညျးတှကေို အသုံးပွုနရေငျးနဲ့ပဲ သငျ့မကျြလုံးတှနေဲ့ သငျ့ကနျြးမာရေးကို ကာကှယျနိုငျတဲ့ နညျးလမျးတှေ ရှိပါတယျ။ သငျက ကှနျပွူတာ၊ ဒါမှမဟုတျ စမတျဖုနျးတဈလုံးလုံးကို ပံမွှနျအသုံးပွုရငျ သငျ့မကျြလုံးကို ကာကှယျဖို့ အောကျပါအခကျြလေးတှကေို အသုံးခကြွညျ့ပါ။
၁. မကျြလုံးလကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပါ
သငျ့ရဲ့ Screen ကိုအမွဲ ကွညျ့မနပေါနဲ့။ မိနဈ ၂၀ ကို တဈခါလောကျ အနားယူပွီး မကျြလုံးလကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပါ။ မကျြလုံးတှကေို လှုပျရှားပါ။ အဝေးကို ကွညျ့ပါ။ မကျြလုံးတှကေို မှိတျပွီး နှိပျနယျပေးပါ။ အဲဒိလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို တဈခေါကျကို ငါးကွိမျမှ ဆယျကွိမျအထိ လိုအပျသလို လုပျပေးပါ။
အပွငျထှကျပွီး သဘာဝအလငျးရောငျနဲ့ ထိတှလေို့ကျရတာဟာ သငျ့ကို သဘာဝနစေ့ဉျစကျဝနျးနဲ့ ပွနျလညျဆကျသှယျ ပေးနိုငျပွီး ညဘကျ စောစော အိပျပြျောကာ မနကျနိုးတာနဲ့ လနျးဆနျးတကျကွှစနေိုငျပါတယျ။ လမျးလြှောကျထှကျခွငျးက သငျ့ကို သဘာဝတရားနဲ့ ထိတှခှေ့ငျ့ပေးပွီး တီထှငျဉာဏျကိုပါ တိုးပှားစပေါတယျ။
၃. သငျ့မကျြလုံးနဲ့ ပါတျဝနျးကငျြကို အဆငျပွအေောငျ ခြိနျညှိပါ
သငျ့ ဒီဂဈြတယျ ကိရိယာလေးထဲက Setting တှကေို သှားကွညျ့ပါ။ Font ကွီးကွီး သုံးပါ။ သငျ့ Screen ရဲ့ Contrast ကို တငျပွီး Brightness ကို တိုးမွှငျ့ကာ သငျနဲ့ သငျ့မကျြလုံးတှေ အဆငျပွနေိုငျတဲ့ အနအေထားထိ ခြိနျညှိထားပါ။ သငျ့ Screen ကို အမွဲ သနျ့ရှငျးတောကျပွောငျနပေါစေ။ Screen ကိုသငျမကျြလုံးကနေ အကှာအဝေး မြိုးစုံမှာ ထားကွညျ့ခွငျးဖွငျ့ မကျြလုံးကို အကှာအဝေးမြိုးစုံ လိုကျပါကွညျ့စနေိုငျပါတယျ။ သငျက Android User ဆိုရငျ အပွာရောငျ ရောငျစဉျတနျးတှကေို ကနျ့သတျဖို့ Twilight ဆိုတဲ့ App ကို Playstore မှာ ရှာသုံးကွညျ့ပါ။
၄. သငျ့မကျြလုံးတှေ အတှကျ ရငျးနှီးမွှုပျနှံပါ
လူတှဟော ငှေ သိနျးပေါငျးမြားစှာကို သောကျသောကျစားစားနဲ့ သုံးဖွုနျးပဈကွပွီး ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အဖိုးတနျအစိတျအပိုငျးတဈခု ဖွဈတဲ့ မကျြလုံးအတှကျကြ တှနျ့တိုနတေတျပါတယျ။ နကောမကျြမှနျ ကောငျးကောငျး ရှာဝယျကွညျ့ပါ။ Gauss Eyewear ဟာ အပွာရောငျ ရောငျစဉျတနျးတှကေို ပိတျဆို့တားဆီးတဲ့ မကျြမှနျတဈမြိုး ထုတျလုပျဖို့ ရှိပါတယျ။ ဖုနျးတှမှောလဲ အပွာရောငျ ကာကှယျပေးတဲ့ Screen Guard တှေ ရှိပါတယျ။ ရှာဖှေ သုံးစှဲကွညျ့ပါ။
ကြှနျတျောတို့ စမတျဖုနျးတှေ၊ Tablet တှကေို စတငျသုံးစှဲလာတတျတာ ဆယျစုနှဈ မကြျောသေးပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ဒီကိရိယာတှဟော ရရှေညျမှာ အမွငျအာရုံကို ဘယျလိုထိခိုကျစမေလဲဆိုတာ ပွောလို့မရသေးပါဘူး။ လောကကွီးဟာ သာယာလှပပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ကိရိယာကို အမွဲ ငုံ့ကွညျ့နပွေီး လောကကွီးကို မော့ကွညျ့ဖို့ သတိမရခဲ့ရငျ သငျ့အမွငျအာရုံပါ ပြောကျကှယျသှားမယျ ဆိုတာတော့ သတိရပါ။
Previous: သင့်အတ္တက သင့်အောင်မြင်နိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်နေပါသလား